ठेला नफर्काएपछि ७ जना मिलेर गुरुङको हत्या, ४ जना अभियुक्तहरु सार्वजनिक
By administrator on	 July 28, 2020 देश, फोटो फिचर, स्थानीय, स्थानीय तह
डोलराज रानाभाट, चितवन, साउन १३ । गत असार २३ गते भरतपुर १० मा बोराभित्र शव फेला परेको व्यक्तिको हत्या आरोपितहरुलाई चितवन प्रहरीले हिजो सोमवार सार्वजनिक गरेको छ ।
उनीहरुले चितवन जिल्ला भरतपुर १४ शिवनगर बस्ने बर्ष ४१ का राज कुमार गुरूङको हत्या गरेर वोरा भित्र पोको पारी भरतपुर १० मैयादेवी कन्या कलेज नजिक झाडीमा फालिएको अवस्थामा शव सडेर दुर्गन्धित अबस्थामा फेला परेको थियो ।
पक्राउ पर्नेहरुमा तनहुँको भानु नगरपालिका ४ सालबिस्ने घर भई हाल भरतपुर महानगरपालिका १० कवर्डहल गेष्टहाउ चौउर नजिक बसोबास गर्ने ३४ वर्षीय कमल गन्धर्व, रौतहट गजुरा नगरपालिका वडा नं.१ घर भई हाल कवर्डहलमा बसोबास गर्ने ३० वर्षीय अम्मर बहादुर थिङ, दाङ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं.११ घर भई हाल कवर्डहलमा बसोबास गर्ने २४ वर्षीय सागर ओली, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.८ गौरीगञ्ज बस्ने ३१ वर्षीय प्रकाश बि.क. रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका सुचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक सुर्य बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार तनहुँको भानु नगरपालिका ४ सालबिस्ने घर भई कवर्डहलमा बसोबास गर्ने २८ वर्षीय लक्ष्मी मगर र सोही ठाउँका ४५ वर्षीय सिता गन्धर्भ फरार रहेका छन् । एकजना वालक पनि छन् । उनको नाम ठेगाना गोप्य राखिएको छ ।
कसरी गरे हत्या?
गत असार २३ गते शव सडेगलेको भेटेपछि प्रारम्भिक वाटै चितवन प्रहरीले हत्या भएको आशंका सहित अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । असार ६ गते कमलले हत्या गरिएका गुरुङलाई आफ्नो ठेला दिए । कमलले ठेला दैनिक १५० रुपैया तिर्नेगरी व्यवसाय प्रयोजनका लागि भाडामा लिएका थिए । भाडामा लिएको ठेला हत्या गरिएका राजकुमारलाई दिएपछि राज कुमार ठेला लिएकै दिनदेखि कमल गन्धर्वसंग सम्पर्कमा आएनन् । जव उनी सम्पर्कमा आएनन् । त्यसपछि उनी खोज गर्न लागे ।
असार १९ गते गते दिनको ६ वजेको समायमा भरतपुर १० स्थित मालपोतचोकमा फेला फेला पारे । राजकुमार गुरुङको साथमा ठेला रिक्सा नभएको कारणवाट उनलाई गन्धर्वले नियन्त्रणमा लिई आफु वसोवास गर्ने स्थान गेष्टहाउस चौउरको अस्थाई बसोबास गर्ने स्थानमा लगे । त्यसपछि ठेला नल्याएको भन्दै कमल गन्धर्व,उनको श्रीमती लक्ष्मी मगर, अमृत भन्ने अम्मर बहादुर थिङ,सागर ओली, प्रकाश बि.क समेतलाई वोलाएर सामुहिक रुपमा मरणाशन्न हुनेगरी कुटपिट गरे । कुटपिटको क्रममा राज कुमार गुरुङले ठेला रिक्सा कालिका नगरपालिका स्थित पदमपुरमा विक्री गरेको भने । कुटपिटबाट ठेला विक्रि गरेको बताएपछि साँढे ६ वजेतिर कमल गन्धर्वले अटो रिक्सा रिजर्भ गरे । त्यसपछि लक्ष्मी मगर, अम्मर बहादुर थिङ्, सागर ओली, प्रकाश बि. क. समेतले मृतक राज कुमार गुरुङलाई सहित लिएर पदमपुर गए । गुरुङले भनेको स्थानमा ठेला फेला परेन ।
त्यसपछि पुन राति ९ बजेतिर गेष्टहाउस चौर फर्किए । त्यहाँ कमल गन्धर्व तथा राजकुमार गुरुङ समेतका केही मानिसहरु बसे भने अरु मानिसहरु आ(आफ्नो गन्तव्यतर्फ गए । रातको करिव साँढे १० बजेतिर राज कुमार गुरुङको सोही गेष्ट हाउस चउरको मन्चमा मृत्यू भएपश्चात कमल गन्धर्वले सो विषयमा अन्य कुटपिट गर्ने व्यक्तीहरुसंग सम्पर्क गरी मृत्यु भएको बताए ।
घटनालाई लुकाउन र अपराधवाट वच्न गरुङको शवलाई वोरामा वाधी एकान्त स्थानको छनौट गरी फाल्ने योजना वनाए । योजना अनुसार कमल गन्धर्व, अमृत भन्ने अम्मर बहादुर थिङ, सागर ओली समेतले रातको समयमा भरपतुर १२ स्थित केन्द्रिय टर्मिनल बसपार्कबाट ठेला रिक्सा ल्याएर गुरुङको शवलाई वोरामा बाँधी कोही कसैले नदेख्ने गरी भित्री सडकको प्रयोग गरी झाडीमा फाले ।
घटनामा संलग्न प्रतिवादीहरुलाई शव फेला परेको दिन नै पहिचान तथा पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान कसुर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । फरार रहेकाको खोजी कार्य जारी रहेको छ ।